Mr. Smart-Stepless DC Inverter Pool Heat saar - Aquark Electric Co., Ltd
xakamaysada xiriiri Round
Down in -5 ℃ hawlgalka
Mr. Smart ansixiyeen stepless kombaresarada inverter, nidaamka gacanta inverter stepless iyo motor taageere brushless. By diinta smart ee xawaaraha kombaresarada, taageere xawaaraha baabuurta iyo nidaamka cadaadis, Mr. Smart siin karaan tamarta la yaab leh badbaadinta iyo waxqabadka aamuseen.
Ilaa 13 jeer ay bulshsada
Markii ay u ilaaliyaan heerkulka pool in inta badan xilli pool, Mr. Smart waxaa socda xawaare hooseeyo taas oo horseedaysa in ay qaab keydinta tamarta fiican iyo jawi pool super aamuseen. COP waa ilaa 13. Waa keydinta tamarta double badan bamka kulaylka / Off On.
Thanks to technology Inverquark ah, Stepless DC kombaresarada inverter iyo DC motor taageere brushless, Mr. Smart waddaa aad aamusnaan oo aad bixisaa jawi kululaynta raaxo leh.
Jilicsan bilowga & codsiga danab ballaaran
Iyada oo stepless kombaresarada inverter DC, Mr. Smart bilaabo 0 Amps in Amps qiimeeyo si tartiib tartiib ah &. Waxaa jira shaqo joojin lahayn in nidaamka korontada guriga. Oo ay diinta ka smart, Mr. Smart lagu saleyn karaa tiro balaadhan oo ah danab oo waa 180V ~ 260V.
Mr.Smart lagu saleyn karaa R32 ama gaaska R410A.
Iyada oo ay gacanta ku APP, waxaad eegi kartaa ama aad iska xakameyso Mr. Smart meel kasta.
loo for hoos si Air -5 ℃ hawlgalka.
COP celcelis ahaan 50% Speed 9 9.6 9.8 9.5 9.6 9.6
COP celcelis ahaan 50% Speed 6.3 6.3 6.4 6.2 6.2 6.4
Kaxaynta heerkulka hawada ( ℃ ) -5 ℃ ~ 43 ℃
Power sahayda 230V 1Ph
awood talooyin lagu qiimeeyo (kw) 0.20~1.09 0.26~1.44 0.34~1.91 0.44~2.44 0.56~3.11 0.60~3.33
awood Input at 50% Speed ​​(kw) 0.4 0.52 0.7 0.89 1.13 1.25
aqbasho qiimeeyo hadda (A) 0.85~4.73 1.13~6.28 1.50~8.33 1.91~10.63 2.43~13.53 2.61~14.49
aqbasho ugu badan ee hadda (A) 6.5 8 12.5 17 19.5 /
heerka Sound at 1 dB (A) 37.8 ~ 49.2 39.6 ~ 51.5 41.9 ~ 52,0 44.2 ~ 55,3 44.3 ~ 56,1 44,9 ~ 56,7
heerka Sound by 50% 1m xawaaraha dB (A) 41.8 44.8 47,5 47.7 48.6 49,1
heerka Sound at 10 dB (A) 17.8 ~ 29.2 19.6 ~ 31.5 21.9 ~ 32 24.2 ~ 35.3 24.3 ~ 36.1 24.9 ~ 36.7
Full Inverter dabbaasha Heat saar